काठमाडौं (शेर्पाखबर) । दुई दिन यता सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्न सफल एक पात्र हुन ‘दावा शेर्पा’ । उनलाई दानुरु भनेरपनि चिन्छन् । कारोडपति शेर्पा एकाएक ‘सडक छाप’ भएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । मागेर पेट पाल्ने र ह्युमपाइपको नालीभित्र बास वस्ने अवस्थामा पुगेका दावा शेर्पाबारे युट्युवबाट सबैले थाहा पाए र चासो बढ्यो । विशेष गरी शेर्पा समुदायले उनका बारेमा चासो राखे । ठूलो घरनाको मालिक एकाएक सडकमा भेटिएपछि सबैलाई आश्चार्य लाग्नू स्वभाविक हो ।
जर्मन, स्वीस, अमेरिका लगायत आधा दर्जन भन्दा बढी विकसित देश पुगेर शेर्पाले राम्रै आर्थिक हैसियत पनि बनाए । उनी लगभग १२ बर्ष अमेरिका बसे । त्यस अवधीमा राजधानीको मुटु मानिने चावहिल सरस्वतिनगरमा ९ आना १ पैसा १ दाम क्षेत्रफलको जग्गा पटक पटक गरेर जोड्न सफल भए । त्यही जग्गामा ठूलो घर बनाए । लामो समय लाग्यो त्यो घर पूरा हुन तर घर पूरा हुन पाउँदा नपाउँदै उनी त्यो घरबाट निकालिन पुगे ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको साविक चौरीखर्क गाविस अहिले खुम्बु पासाङ ल्हमु गाउँपालिका ३ मा जन्मेका शेर्पा राजधानी ठूलो सपना बोकेर आएका थिए । सामान्य आर्थिक हैसियत भएकाले उनले आर्थिक अवस्था सुधार गर्न अनेक संघर्ष गर्नु पर्यो । तर, थोरै असवधानीले अहिले सडकमा पुर्याए । धन्न यतिबेला सामाजिक सञ्जाल छ । छोटो समयमा सबैका नजर उनीमाथि पर्यो । उनका काकाकी छोरी लाक्पा याङजी शेर्पाको दाया पर्यो र उद्धार गर्यो । ‘मैले नदेखेको भए । मेरो दाईको त्यही नालिभित्र जीवनलिला...हुन्थ्यो ।’ लामो सास फेर्दै वहिनी लाक्पाले थपिन ‘मैले त दाई अमेरिकामै हुनुहुन्छ होला भन्ने सोचेकै थिएँ । यो घटनापछि म छाँगोबाट खसेझैं भएँ ।’
लामो समय अमेरिका वसेका दावा सन् २०१२ मा नेपाल फर्के । मादकपदार्थ ‘धेरथोर’ सेवन गर्नु सामान्य कुरा थियो उनीपनि प्रयोग गर्थे । उनी नेपाल आए तर यहाँपनि दैनिकी चलाउन उनी विभिन्न काम गर्थे । आफ्नै भाई नाता पर्नेको ‘वियर’ मदिरा उत्पादन कम्पनीमा काम गर्न उनी चित्तवन तिर हानिए । चितवनमा बसेर काम गर्दा उनको एक तामाङ समुदायकी नारीसँग सम्पर्क भयो । त्यसपछि उनको परिवारमा खटपट शुरु भएको देखिन्छ । त्यो खबर घरसम्म पुग्यो । परिवारमा कलह थपियो । उसै मदिरा सेवन गरेको आरोपमा गाली खेप्ने दावालाई अब के चाहियो र ?
त्यसपछि शुरु भएको पारिवारिक कलहले उनलाई घर छोड्न वाध्य बनायो । उसैको भनाईलाई आधारमान्ने हो भने ‘त्यसपछि चित्तवनमा वस्ने गरी घर छोडेर उनी हिँडे ।’ घर छोडेर हिँड्दा उनले श्रीमतीसँग आफ्नो भागको भनेर ५ लाख रुपैयाँ लिएर हिँडेका थिए । त्यही पैसाले चितवनमा शेर्पा कै नामबाट होटल खोले । केही समय त राम्रै चल्यो तर उनी जोसँग वस्दै आएकी थिए । पक्षघातकै कारणले उनी मरिन त्यसपछि होटल वन्द गर्नु पर्यो । होटलमा भएका सामानहरु एकाएक गर्दै वेचेर खर्च गर्न थाले । त्यहाँबाट पनि उनी भारततर्फ हिँडे । त्यहाँ मजदुरी गर्दै जीवन चलाए । नेपाल आए । ज्याला मजदुरी गरे । ट्रेकिङमा पनि गए । जीवन चल्दै थियो । एक्लो ज्यान बचाउने काममा उनी लागि रहेकै थिए । हुँदाहुँदै कोरोना भाइरस आयो र दावाको जीवनमा पनि प्रवेश गर्यो । कोरोनाका कारण सरकारले वन्दावन्दी घोषणा गर्यो । उनी काम विहिन भए । उनीहरुसँग कुनै बचत थिएन । कमाएको सबै पैसा खर्च भइसकेको थियो । घरमा जाने त कुरै भएन ।
ज्यालामजदुरी गर्दै गुजरा चलाउने दावाले काम पाउन छोडेपछि मागेर खान थाले । शुरु शुरुमा सामाजिक अभियान्तहरुले विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाए । जहाँ खाना दिन्छ मागेर खान थाले तर पछि त्यो अभियानपनि सकियो । बन्दावन्दीका बेला नयाँवस पार्कको कपडा पसल राख्ने छाप्रोमा रात वित्थ्यो । दावाको मात्रै हैन । ‘म जस्ता सयौं थिए तर अरु करोडबाट झरेका थिएनन होला सायदै ।’ आशुँ टिलपिलाउँदै दावा भने ‘पछि वन्दाबन्दी खुल्यो । पसल खुले । छाप्रोमा फेरी पहिला जस्तै पसल राख्ने भएपछि नालिभित्र बसाई सर्नु पर्यो । दुःखको दिन त अबको शुरु भयो त ।’ करीब ४ महिना गंगाबु नयाँबर्षमा विताएका दावाको कहानी अझै कारुनिक छ, सुन्दै जाँदा मार्मिक छ । उनको जीवन सिकाई हो । उनको जीवन प्रयोगशाला जस्तो भएको छ ।
जेठा छोरा अष्ट्रेलियामा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर छन् । छोरी डेण्टिस्ट हुन् । उनीपनि उतै छिन् । कान्छा छोरा राजधानीकै नाम चलेको अस्पतालमा काम गर्छन । उनी सर्जन हुन् । ‘नामका अगाडी डा. लेख्छन् । तर, आज बुबाको यस्तो अवस्थामा उनी कता छन् ? के गर्दै छन् ? कुनै पत्तो छैन । सामाजिक सञ्जालमा रोइलो हुँदा देखेको नदेखेझैं गरी बसेका छन् ।’ दावाका वहिनी लाक्पा याङजी शेर्पापनि रुँदै भन्छन् । ‘बरु सन्तानै नभएको भए, धन सम्पती नै नकमाएको भए वेग्लै कुरा हुन्थ्यो । तर, दाईको त यो हालत कुनै रुपमा स्वीकार्य भएन नी ।’
जीवनको आरोहअवरोहमा अनेक चुनौतिहरु सामाना गर्नु स्वभाविक हो । तर, दावाको जीवन कथा अरुको भन्दा फरक छ । हिजो करोडका हिसाब गर्ने उनलाई आज रुपैँया देख्न विन्ति विसाउनुपर्छ । अहिले बहिनीको घरम कोठा दिने भएका छन् । त्यहाँ कोठामा नयाँ सामान जोरजम्मा गरेर कानूनी लडाई लड्ने सोचमा छन्, दावा । उनका बारेमा बुझ्न पुगेका आदिवासी अधिकार अभियान्त आङकाजी शेर्पाले शनिबार पाँच हजार रुपैयाँ हातमा थमाए । र, न्याय प्राप्तिको लडाईमा सघाउने बचन दिए । यता ‘छोराहरुसँग सम्पर्क बढाउने र न्याय निरुपण गर्ने कार्यमा सहजिकरण गर्ने’ नेपाल शेर्पा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले बचन दिएका छन् । संघले सामाजिक विभाग प्रमुख साङ्गे लामा शेर्पालाई घटनाको तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मा दिइसकेको छ । उता सामाजिक सञ्जालमा चासो राख्नेहरुले दावालाई सन्तानहरुले व्यवस्थापन गरोस्, समस्या पारिवारिक भएकाले परिवारमै बसेर समाधान होस् भन्ने चाहना राखेका छन् ।